यो तपाईंले सोशल मिडियामा सामग्री साझेदारी गर्ने तरिका हो Martech Zone
यो तपाईंले सोशल मिडियामा सामग्री साझा कसरी गर्नुहुन्छ
आइतबार, जुलाई 14, 2013 Douglas Karr
यदि तपाईं वास्तवमै फेसबुक र गुगल + मा तपाईंको पहुँच अधिकतम बनाउन चाहनुहुन्छ जब तपाईं सामग्री साझा गर्नुहुन्छ, हाम्रो ग्राहक भन्दा अगाडि नहेर्नुहोस्, एन्जीको सूची। धेरै व्यक्तिहरू (हामी जस्तो) हाम्रो सामग्रीलाई सामाजिक मिडियामा धक्का दिन्छन्aको प्रयोग गरेर प्रकाशन अनुप्रयोगहरूको होस्ट जस्तै Hootsuite वा बफर।
समस्या यो हो कि हाम्रो लेखहरू फेसबुक र Google+ मा न्युन पहुँचको साथ देखा पर्दछ। धेरै सेयरहरू छैनन्, धेरै धेरै डायलग छैन। हामी आ-तेस्रो पक्ष प्रयोग गरीरहेका छौं तिनीहरूलाई प्रकाशित गर्नको लागि ताकि हामीलाई थाहा छ कि एजरेन्कले पहिले नै हाम्रो दृश्यता तल सार्दैछ। पोष्ट गरिएका लेखहरू यस्तो देखिन्छन्:
अब एक झलक हेर्नुहोस् एन्जीको सूची र कसरी उनीहरू आफ्नो लेख प्रकाशित गर्छन्:
२ Sha सेयरहरू, L२ लाइकहरू, र विषयमा 23 टिप्पणीहरू, दायाँ शिंगल र Choose कसरी छनौट गर्ने! मान्छेहरू ... त्यो वास्तवमा केहि आश्चर्यजनक रमाइलो विषय हो जुन विश्व प्रतिक्षा गर्दै थियो, होइन?
हाम्रो साझा गर्ने विधि र तिनीहरूको बिचको भिन्नता यो हो कि उनीहरूले धेरै राम्रो फोटो प्रदान गर्छन् र यसलाई उनीहरूको लेखको छोटो लिंकको साथ अपलोड गर्छन्। यो म्यानुअल प्रक्रिया हो र ग्राफिकको विकास गर्न र म्यानुअल रूपमा यसलाई अपलोड गर्न अतिरिक्त समय आवश्यक पर्दछ ... तर यो सयौं भइरहेको छ, यदि हजारौं व्यक्तिहरू लेखलाई हेरेनन् भने।
छवि स्ट्रिमको पूर्ण चौड़ाईमा प्रदर्शित हुन्छन् - सानो थम्बनेलको साथ अन्य लेखहरूको तुलनामा ठूलो भिन्नता। जसो मान्छे फेसबुक र Google+ मा उनीहरूको स्ट्रिमहरूमा स्क्रोल हुँदैछन्, तिनीहरू पाठ द्वारा ब्रीज गर्छन्, एक वा दुई लेख थम्बनेलहरू समात्न सक्छन्, तर तिनीहरूका आँखाले यी ठूला छविहरू हराउन सक्दैनन्! Google+ ले उनलाई प्रकाशित गर्दछ लगभग पूर्ण ब्राउजर चौड़ाई मा!
यी तस्वीरहरू सजिलैसँग पोष्ट गर्नका लागि फोटोशपको इलस्ट्रेटरमा कुनै प्रकारको टेम्पलेटको विकासको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ ... ती वास्तवमै काम गर्छन्!
टैग: फेसबुकगुगल प्लसGoogle +तस्बिरहरूशेयरलेख साझा गर्नुहोस्
कसरी एक प्रभावशाली, ब्लगर, वा पत्रकार मा पिच गर्ने छैन
नेतृत्व उत्पादनका लागि सोशल मिडिया प्रयोग गर्दै
जुलाई,, २०१ at 16::2013। बिहान
यो हामी मध्येका ती ब्लगका लागि ठूलो रणनीति हो। सुझावको लागि धन्यबाद
पोष्टका लागि धन्यबाद, डगलस। त्यहाँ दुई दृष्टिकोण बीच एक ठूलो भिन्नता छ र म एन्जीको कसरी अधिक सफल हुनेछ देख्न सक्नुहुन्छ।
अगस्ट,, २०१72013:२१ अपराह्न
हे डगलस - मलाई यो पोष्ट मन पर्छ र मेरो जी + लेख को लागी कराएको को लागी धन्यवाद। छविहरूको प्रयोग गरेर र यससँग सफलता प्राप्त गर्ने ब्रान्डको वास्तविक केस उदाहरणहरू हेर्नको लागि उत्तम छ। म पुरा सहमत छु। म पनि बफरलाई मन पराउँछु, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोस्टहरूका लागि तस्वीरहरू अपलोड गर्न पनि समय लिन्छु - विशेष गरी जी + र फेसबुकमा। G + मा लिंक गरिएको वा अपलोड गरिएको छवि बीचको भिन्नता विशाल छ, निश्चित रूपमा!